कहिले बन्छ बौद्ध–जोरपाटी–साँखु सडक ? बहानाबाजी गर्दै ‘ठेकेदार’ ! सरकारको लाचारीपन ! (फोटो फिचरसहित)
‘बसौँदेखि सडक बन्ला भनेर पर्खिरहेका छौँ’– स्थानीयबासी
| 2018-05-06 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । राजधानीको केन्द्रमा रहेको बौद्ध–जोरपाटी–साँखु खण्डको सडक विस्तारको कामले उक्त खण्डको सडकको अवस्था दयनीय बनेको छ ।
यस सडक खण्डमा कहिल्यै पनि आनन्दसँग यात्रा गर्न पाइँदैन । कहिले कुन क्षेत्र त कहिले कुन क्षेत्र सडक बिग्रिरहेको हुन्छ ।
निर्माणको नाममा झन् सडकको अवस्था बिग्रिरहेको अवस्था छ । वर्षायाममा हिलोले र हिउँदमा धुलोले उक्त सडकखण्ड विरुप बनाएको छ ।
उक्त सडकमा पानी पर्दा खुट्टै चाल्न नसक्ने अवस्था छ । बर्सेनी यस सडकखण्डको मर्मत भइरहेको देखिन्छ तर पुरा भने कहिल्यै भएको देखिँदैन ।
काम सुस्त हुँदा जनतालाई सास्ती भइरहेको छ भने ‘ठेकेदार’ कम्पनी भने विभिन्न बहाना बनाउँदै ठिलासुस्ती गरिरहेको छ ।
त्यहाँका स्थानीय सडक निर्माण पुरा हुने मिति कुर्दा कुर्दा हैरान भइसकेका छन् । निर्माण कम्पनीले स्थानीयको आन्दोलन, कहिले अदालतको ‘स्टे अर्डर’ त कहिले ढल बिछ्याउने कामले निर्माण कार्यलाई बाधा गरेको छ भनी बहाना बनाउने गर्छन ।
समस्यै समस्यामा जेलिएको सडक
धुलो–धुँवाको समस्या, ट्राफिक जाम, सवारी साधनमा बढी समस्या आउनेजस्ता विभिन्न समस्या देखा पर्ने गरेका छन् ।
यसबाट सर्वसाधरणलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको हुन्छ । उक्त क्षेत्रमा कार्यालय तथा व्यापार गर्नेहरुको धुलो र हिलोले विजोग बनाइरहेको छ ।
यसबाट स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको हुन्छ । यस्ता समस्याबाट स्थानीय ग्रसित भएको बसौँ भइसकेको छ । तर विडम्बना अहिलेसम्म पनि सडक विस्तारको काम पुरा हुन सकेको छैन ।
सरकारले उक्त सडक खण्डको विस्तार गर्ने काममा प्रयाप्त मात्रमा खवरदारी गरेको छैन । निर्माणको क्षेत्रमा यस्तो लापरबाही हुँदा पनि सरकार मौन बसेको छ ।
यस कारण उक्त क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो । विकास निर्माणको क्रममा सरकारी निकायबाट समन्वयको पनि अभाव भएको छ ।
यस कारण सयममै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । समस्या आएको सुधार्ने काम सरकारको भएकोले बहानाबाजी गरेर पन्छिन पाइँदैन ।
सडक विस्तारको कार्य तिब्र गतिमा हुन नसक्दा सर्वसाधरण आक्रोशित भएका छन् । सडक नबन्दा उक्त स्थानका स्थानीय धुलो र हिलोले ग्रसित छन् ।
बिहान घरबाट निस्केको मान्छे बेलुका फर्किँदा धुलाम्मे तथा हिलाम्मे भएर नचिन्ने अवस्थामा आइपुगिन्छ ।
उक्त क्षेत्रका स्थानीय केशव बस्नेतले भने, ‘यस्तो हिलो र धुलो भएको ४ वर्ष भइसक्यो । अझै यहाँ ठूलो पानी आएर पानी जमेपछि यताउति केही गर्न सकिँदैन ।’
उनले थपे, ‘सरकारले पनि विकास निर्माण गर्ने भन्दै निर्माणका सामाग्री ल्याएर सडकमा राखिएको हुन्छ जस कारण सवारी जाम हुन्छ ।’
अर्का स्थानीयवासी विमल कटुवालले भने, ‘अब वर्षा लाग्यो माटो ल्याएर खाल्टा पुर्यो भने पनि पानीले बगाएर लान्छ, रोडा ल्याएर हाल्यो भने गाडी कुदाउँदा उछिट्टिएर कहाँ पुग्छ पुग्छ ।’
उनले थपे, ‘सडक हैन खेतजस्तै भएको छ । हामीले त्यसका धान रोप्ने कि के गर्ने भन्ने खालको छ सडकको अवस्था ।’
आइतबार, २३ वैशाख, ०७५